ငါးမိနစ်အတွင်း နုပျိုလန်းဆန်းတဲ့ အသားအရေကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ရန်အတွက် DERMAFLASH 2.0 LUXE ရှိနေပြီနော်! | CosmeticMyanmar
Home » Article » ငါးမိနစ်အတွင်း နုပျိုလန်းဆန်းတဲ့ အသားအရေကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ရန်အတွက် DERMAFLASH 2.0 LUXE ရှိနေပြီနော်!
ငါးမိနစ်အတွင်း နုပျိုလန်းဆန်းတဲ့ အသားအရေကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ရန်အတွက် DERMAFLASH 2.0 LUXE ရှိနေပြီနော်!
အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင့်။ ဒီတခေါက်မှာတော့ သင်္ကြန်အတွင်း ပျက်စီးသွားတဲ့ အသားအရေကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းဖို့ရန်သာ မဟုတ်ဘဲ အလွယ်တကူ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းနိုင်စေဖို့ရန်အတွက် Product ကောင်းတခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ Product ကို DERMAFLASH က ဖန်တီး ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး DERMAFLASH 2.0 LUXE လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။
ဒီ Product မှာ Cleanser, Moisturizer, ဓားသွား ၅ခု, အားသွင်းခုံနဲ့ DERMAFLASH Device တို့ပါဝင်ပါတယ်။ အသုံးပြုနည်းသိစေဖို့ရန်အတွက်လည်း လမ်းညွှန်ကို ထည့်ပေးထားတာကြောင့် အသုံးပြုရတာလွယ်ကူစေမှာပါ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ Cleanser ခေါ် Preflash အနည်းငယ်ကို ရေစိုလက်ပေါ်တင်ပြီး အရင်ပွတ်ပေးပါ။ အမြှုပ်ထွက်လာရင်တော့ မျက်နှာ အနှံ့ပွတ်ပြီး နှိပ်နယ်ပေးပါ။ နှိပ်နယ်အပြီးမှာ ရေဆေးချပြီး မစိုမခြောက်အနေအထားဖြစ်အောင် သုတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ DERMAFLASH 2.0 LUXE စက်ကို ဓားသွားတပ်ပေးပါ။ ဓားသွားတပ်အပြီးမှာ Power button ကို တကြိမ်နှိပ်လိုက်ပါက နူးညံ့တဲ့ တုန်ခါမှုကို ရရှိမှာဖြစ်ပြီး ဒုတိယအကြိမ် ထပ်နှိပ်လိုက်ပါက ပိုမိုအားကောင်းတဲ့ တုန်ခါမှုအားကို ရရှိမှာပါ။ တတိယအကြိမ် နှိပ်တဲ့ အခါမှာ စက်က Power Off ဖြစ်သွားမှာပါ။ Power Off ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ သူ့ရဲ့ အားသွင်းခုံပေါ် ပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီး အားသွင်းလိုက်ရုံပါပဲ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Moisturizer Postflash အနည်းငယ်ကို မျက်နှာအနှံ့ ပုတ်လိမ်းပြီး ရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပေးရုံပါပဲ။ ဓားသွားတွေဟာ တခါသုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အသုံးပြုပြီးတဲ့အခါ အမှိုက်ပုံးထဲသို့ ညွှန်ပြီး Eject button ကိုနှိပ်လိုက်ပါက အလိုလို ဓားသွားထွက်သွားမှာပါ။
အသုံးပြုတဲ့အခါ သာမန် တုန်ခါမှုမျိုးလောက်သာအသုံးပြုချင်ရင် Power button ကို တချက်နှိပ်ပြီး မျက်နှာအသားအရေတင်းရင်းနေစေရန် လက်တဖက်ဖြင့် အသားအရေကို ထိန်းထားပြီး ကျန်လက်တဖက်နဲ့ မျက်နှာအပြင်ဖက် မေးရိုးလောက်ကစပြီး အတွင်းဖက်သို့ တဖြည်းဖြည်း ဆွဲပေးပါ။ အသုံးပြုတဲ့အခါ နှုတ်ခမ်း၊ နှာခေါင်း၊ မျက်ခွံတွေကို ရှောင်ပြီး အသုံးပြုပေးပါ။ အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ သိသိသာသာပဲ မျက်နှာပြင်ရှိ ဆဲလ်သေတွေ၊ အမွှေးအမျှင်တွေ နဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေ ပါလာတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ အသုံးပြုပြီးနောက်မှာတော့ ချောမွေ့ပြီး နုပျိုတဲ့ အသားအရေ မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာပါ။ ဒီစက်လေးရဲ့အားသာချက်ကတော့ အသားအရေထိခိုက်နာကျင်မှုမရှိပဲ ချေးညှော်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး မျက်နှာအသားအရေကို ပိုမိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Skin Care Product တွေအသုံးပြုတဲ့အခါ မျက်နှာက ပိုမိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေး၊ အသားအရေမရွေးအသုံးပြုနိုင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အသားအရေ အရောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၁၈၉ ဖြစ်ပြီး USA Branded Online Shopping တို့မှာ မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
Image Source :www.dermaflash.com
မျက်ရစ်ရှိသယောင်ထင်ရစေမယ့်မျက်ဝန်းလေးအတွက် cut crease look ကအထာကျကျဘယ်လိုပံ့ပိုးမလဲ?
Rihanna ရဲ့ အလန်းစား Fairy Bomb Glittering Pom Pom!